Madaxweyne Qoorqoor oo Fariin u Diray Shacabka Galmudug – Goobjoog News
Madaxweyne Qoorqoor oo Fariin u Diray Shacabka Galmudug
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo khudbad ka jeedinayey munaasabaddii furitaanka kalafadhiga 2-aad ee Baarlamaanka Galmudug ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah kuwaas oo Galmudug u qabsoomay intii ay jirtay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in lagu guuleystay in la nabadeeyo deegaannada Galmudug lana xakameeyo maleeshiyo beeleedkii ku dagaalami jiray Gobolada Mudug iyo Galgaduud, waxaana uu itaas ku daray in ay weli la sugayo goglo nabadeed oo ay isugu imaanayaan beelo dhowaan dagaalamay, waxaana uu yiri mar uu ka hadlaayey.
“Waxaan ku guuleysanay inaan xareyno ciidamo beeleedyadii kala duwanaa ee ku sugnaa deegaannada qaar iayadoo inta dhimanna la xareyn doono oo gacanta lagu hayo in ay soo xaroodaan oo qeybo waa weyn oo muuhiim ah ay noo dhiman yiohiin. Waxaa mardhow qalin jabin doona ururada tabarka galay Horseed Shabeel iyo ciidamada Daraawiishta Galmudug oo tababarka ku kala qaadanaya dugsiyada indho-qaris iyo Dhaankaroone” ayuu yiri.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa Shacabka Galmudug ugu baaqay in ay diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah Al-Shabaab oo uu sheegay in ay dhibaato ku hayaan degaano ka mid ah Galmudug.
Madaxweyne Waare oo Magacaabay Guddiga Soo Xulista Baarlamaanka Labaad Ee Hirshabeelle
Qoysas Kasoo Qaxay Suuriya oo Soo Gaaray Deegaannada Galmudug
Ra'iisulwasaarahii Wadanka Japan oo Iscasilay